के हामी कृपया मार्केटिंगमा अझ राम्रो हुन सक्छौ? | Martech Zone
के हामी कृपया मार्केटिंगमा अझ राम्रो हुन सक्छौ?
शनिबार, अक्टोबर 1, 2016 Douglas Karr
यो स्पूफ पुरस्कार भिडियो शानदार छ। सबै भन्दा राम्रो हास्य सधैं ईमानदारी मा जड भएको देखिन्छ, र पुरस्कार सबमिशन पक्कै हाँस्न योग्य छन्। म पूरै पुरस्कार poo-pooing छैन; मलाई लाग्छ उद्योग मान्यता अपरिहार्य छ। यसले तपाईंको अधिकारको प्रमाण प्रदान गर्दछ र अत्यधिक सान्दर्भिक दर्शकहरूलाई जागरूकता बनाउँदछ।
हामीसँग एउटा अविश्वसनीय छ सार्वजनिक सम्बन्ध एजेन्सी जुन हामीसँग काम गर्छौं। उनीहरूले आफ्नो हातहरू हामीसँग पाएका छन्, हाम्रो उत्पादनलाई (यो प्रकाशक) संसाधनको रूपमा धकेल्दै, हाम्रो डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी एक नेता को रूप मा, जेन एक को रूप मा मार्केटिंग MC र स्पिकर, र म एक रूपमा मार्केटिंग विचार नेता, मार्केटिंग मुख्य वक्ता, र मार्केटिंग स्पिकर। हाम्रो PR मान्छे को बारे मा ठूलो कुरा यो हो कि तिनीहरूले हामीलाई सँधै आफूलाई अलग गर्न दबाव दिन्छन्। निर्लज्ज आत्म पदोन्नति। उह।
निर्लज्ज आत्म-पदोन्नति buذ योग्य लिंकहरूको बोरिंग स्ट्रिंगको लागि माफ गर्नुहोस्। म पनि दोषी छु।
मलाई थाहा छैन जहाँ अहंकार र आत्मविश्वासको बीच लाइनहरू धमिलो छन्, तर यो सजिलो छैन। क्यान्ड केस स्टडीज बीच जहाँ तपाईं मात्र राम्रो परिणामहरू छान्नुहुन्छ तपाईंले बजडवर्ड्सको स bu्ग्रहमा क्यान्ड केस स्टडीमा - यो सबै क्रियान्वित छ। मलाई थाहा छ कि यो राजनीतिक भाषणहरू, आरएफपी प्रतिक्रियाहरू, र बाँच्नको लागि प्रेस विज्ञप्तिहरू लेख्न कस्तो हुन्छ।
आज मैले एउटा कन्फरेन्सबाट मेरो स्चवाग ब्याग खाली गरें - फोन चार्जर, स्टिकी फोन स्ट्यान्ड, युएसबी थम्ब ड्राइभ, मोल्स्किन्स, यो पोस्ट प्याड नोट र अन्य बियरको बोतल ओपनर। जोनाथन ग्रीन, को लेखक स्ल of्गको हरियो शब्दकोश, शब्द पछाडि ट्र्याक गरियो schwag, तपाईंले शब्दको उत्पत्तिलाई विश्वास गर्नुहुन्न:
कम गुणस्तरको मारिजुआनालाई डिचविड, स्चवाग, र स्कंकविड भनिन्थ्यो।
मैले सँधै सोचें कि schwag भनेको ब्ल्यापको झोला हो जब यो तपाईंको होटेलको फोहरमा पुग्छ। तर होइन। यो अझ खराब छ ... क्रिप्पी पोट भाँडो बराबर बराबर। मैले भाँडा कहिल्यै बेचेको छैन, तर म केवल यो कल्पना गर्न सक्छु कि यो पेशा कसरी पूरा हुनेछ। क्रिप्पी मार्केटिंग खराब हुन सक्छ।
हामीले आफैंले बजार गर्नु पर्छ, तर हामीले अरू सबैले यो गर्नुपर्दैन।
यहाँ म के भन्छु मेरो उद्योगको वरिपरि हेर्नुहोस्।
तथ्य यो छ कि हामीले यो गर्नु पर्दछ तर हामीलाई मौलिक हुनबाट रोक्दैन। भगवानका लागि, मान्छेहरू, हामी हाम्रो मार्केटिंगमा केहि विचार राखौं। आफैंलाई साथीहरूबाट अलग गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई नक्कल गर्न प्रयास गर्न रोक्नुहोस्।
ठीक छ, यो यो हो जब तपाईं मेरो भद्दा मार्केटिंगको लागि मलाई शहरमा लैजानुहुन्छ। 😉
टैग: पुरस्कार कार्यक्रमपुरस्कारआफूलाई ब्रान्डि। गर्दैअहम्म मलाई माया गर्छुआफैलाई मार्केटिंग
द्रुत रूपमा: किन प्रदर्शन स्मार्ट मार्केटका लागि कुञ्जी हो